चीनमा फेरी अर्को नयाँ प्लेग भेटियो, महामारीको सम्भावना कति ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/चीनमा फेरी अर्को नयाँ प्लेग भेटियो, महामारीको सम्भावना कति ?
प्लेगको संक्रमित भेटिएको पुष्टि भएपछि चीनमा अहिले जीवजन्तुको सिकार गर्न र मासु खान रोक लगाइएको छ । कोरोनाको जस्तै सचेतना अपनाउदै रोगको लक्षण देखिए तत्काल खबर गर्न आग्रह गरिएको छ ।विश्वमा बेलाबेलामा प्लेग देखा परिरहन्छ । सन् २०१७ मा म्याडग्यासकरमा ३०० जनाभन्दा बढी मानिसमा प्लेग भएको थियो ।
काठमाडौं प्रवेशमा कडाइ, अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई मात्रै भित्रिन दिइने